Isethi Ephelele Samathiphu Okwengeza Ukukhokha Kwakho Ngokuchofoza Ukukhangisa ROI | Martech Zone
Isethi Ephelele Samathiphu Okukhulisa I-ROI Yakho Yokukhangisa Ngokukhokha Ngokuchofoza
NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2015 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi lokhu infographic kusuka ku-Datadial uthi yebhizinisi elincane, Ngizothembeka ukuthi sisebenza namanye amabhizinisi namabhizinisi amakhulu angazisebenzisi eziningi zalezi zeluleko! Lolu kungaba uhla oluphelele kakhulu lwamathiphu engiwabonile uma kuziwa ekusebenziseni ukukhokha ngokuchofoza ngakunye ku-Google ngempumelelo.
Akunandaba ukuthi unamuphi umkhakha, amaqhinga ongawasebenzisa ukwenza impilo ibe lula kubaphathi be-PPC ihlala ifana. Le infographic (kusuka ku-Datadial kuwe, ngothando) yehlisa ukucatshangelwa okungu-53 kwempumelelo ye-Pay-Per-Click. Izinyathelo Ezingama-53 Zempumelelo Yokugcina ye-PPC Yamabhizinisi Amancane
Khokha Ngokuchofoza Ngamathiphu
Ukufana kwegama elingukhiye - Hlanganisa amagama abanzi nacacisiwe okusesha ngokuhamba kwesikhathi.
Izikhangiso - Zama umbuzo ohlukile wokusesha nokuhlanganiswa kwesikhangiso.
Competition - Yiziphi izintengo nemiyalezo esetshenziswa izimbangi zakho ezisebenzisayo?
Izandiso zesikhangiso - Izandiso zishayela ukuzibandakanya okukhulu futhi azibizi imali eyengeziwe.
Amagama angukhiye omude - imvamisa ibiza kancane, ihambisana kakhulu, futhi iholele ekuguqulweni okukhulu.
Amagama angukhiye eDynamic - Shintsha ngokuzenzakalela amagama akho angukhiye esikhangisweni kungakhuphula ukuhambisana nokuguqulwa kwamanani.
Ungachofozi Imfucuza - Sebenzisa amagama angukhiye angemuhle ukugwema inhlanganisela engahlobene abasebenzisi bokucinga abangeke bayithole ifanelekile
test - bheka imininingwane, shintsha okungasebenzi futhi uthuthukise okwenzayo.
ukungaguquguquki - qinisekisa ukuthi laundage yakho nethoni ifana nomkhiqizo wakho nokuqukethwe
Qonda Usesho Lwakho ne-Web Analytics
Iziteshi eziningi - Ucwaningo search, ukubonisa, bethenga, iziteshi mobile kanye video.
Okujwayelekile - gwema amagama wokusesha ejwayelekile angakhuphula izindleko zakho nethrafikhi, kepha angaholeli ekuguqulweni.
Indawo - uma uqhuba amabhizinisi endawo noma amaningi wendawo, ukusethwa kwendawo okuqondiswe kuyo.
Izibalo zabantu - khomba izithameli zakho ngobudala, ubulili nezinye izici.
Ukwenza Okungcono - Qinisekisa ukuthi izikhangiso zakho zihambisana nemihlahlandlela.
Idatha - bamba idatha eningi ngangokunokwenzeka ukuze wenze kahle isu lakho.
Amafomu - gcina amafomu amafushane futhi amnandi.
Hlaziya - hlaziya idatha yakho ukukhomba amathuba.
Ukukhangisa Okuqukethwe, Khombisa Izikhangiso
I-Remarket - thintana nezivakashi ngemuva kwe-tehy've usebenzise isayithi lakho futhi washiya.
Idivayisi - zama ukukhomba kuselula, kudeskithophu noma kuzo zombili ukukhomba umehluko.
Chofoza ukuze ushaye - nikeza indlela yezikhangiso zeselula ongayishayela ngqo kusuka kusikhangiso.
Clickability - yenza izithombe zakho zichofoze ngokusobala.
Izilinganiso Zomthengisi nezibuyekezo - Faka izilinganiso nokubuyekezwa kokwethembela okuphezulu.
I-URL - faka amagama asemqoka kuma-link slugs akho.
Graphics - Sebenzisa ihluzo ezifanele.
Speed - Ukukhuphuka kwesivinini sekhasi kuzothuthukisa izinga lakho lesikhangiso.
Isabele - qinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho iyasabela ekubukweni kweselula noma kwedeskithophu.
Okubhaliselwe - engeza ukubhaliswa kwencwadi yezindaba ukuze uhlale uzibandakanya nezivakashi ezithandayo.
Ukuthuthukisa - Nciphisa inani lokuchofoza okudingekayo ukuguqula.
nobufakazi - bonisa ubufakazi kusayithi lakho ngokuthembeka.
Lezi izeluleko ezimbalwa ezibaluleke kakhulu, nayi yonke i-infographic:
Tags: i-adwordsizandiso ze-adwordsAma-Analyticschofoza ukusebenzisa ifanelechofoza ukuze ushayeimininingwaneukubalwa kwabantuikhasi lokufika ledeskithophukhangisaamagama asemqoka ashukumisayonokwenza kahle ifomuamagama angukhiye ejwayelekileukuqondiswa kwendawoi-google adwordsI-google analyticsngaphakathiukwenziwa kwekhasi lokungenaukukhonjwa kwendawoamagama angukhiye omudeikhasi lokufika leselulaamaselula ppciziteshi eziningiamagama angukhiye amabiisivinini sekhasichofoza okukhokhelwayoukusesha okukhokhelweukuhlolwa kokucinga okukhokhelweukhokha ngokuchofoza ngokukodwappcizikhangiso ze-ppcukuhlaziywa kwe-ppcppc iselulaukuhlolwa kwe-ppcukumaketha kabushaisabeleIzibuyekezoukubuyekeza komthengisiubufakazi
Douglas Karr Wednesday, December 23, 2015 Wednesday, December 23, 2015
Izibalo ezi-5 Zokufakazela Amathuluzi Wokuthengisa Kwamaselula zithuthukisa kakhulu ukusebenza
IGroove: Ithikithi Le-Helpdes lamaqembu wokusekela